:: My Little World ::: Thank you guys!
အခုရက်ပိုင်း ဒီနေရာမှာ ဘာမှကို မရေးဖြစ်သလို အွန်လိုင်းလည်း သိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး။ အမြဲတွေ့ နေ၊ စကားပြောနေကြ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တောင် အရင်လို မတွေ့ ဖြစ်၊ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။ လူရော စိတ်ပါ အနားယူနေခဲ့တာလို့ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေကလွဲရင် တခြားဘာမှ မလုပ်ဖြစ် သလောက်ပဲ။ အခု နောက်ပိုင်း ကျန်းမာရေး အခြေအနေကလည်း အရင်လို မဟုတ်ဘူး၊ ချူချာတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြောသလို အသက်ကြီးလာလို့ရောဂါထူလာတာဆိုတာ ဟုတ်မှာ။ ကျန်းမာရေး နဲ့စိတ်သက်ပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် အချိန်ပေး ရှင်းပြ ကူညီခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုခု ရေးတင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ ၁ ပတ် လောက်ရှိပြီ။ ဘာအကြောင်းရေးရေး ၁ ကြောင်း ၂ ကြောင်း ထက်ပိုပြီး ရေးမရတာနဲ့ဘာမှ မတင်ဖြစ်တာပါ။ ရေးလက်စ ရှိတုန်းကသာ ရေးလို့ ရတာ၊ မရေးတာကြာရင် ဘာကိုဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ ဒိုင်ယာရီလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မကြုံတွေ့ ရတာလေးတွေကို မှတ်တမ်းအနေနဲ့အရင်လိုပဲ ချရေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါအုံးမယ်။ အမြဲလာကြည့်လေ့ ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဘာလို့ပျောက်နေတာလဲ၊ ဘာများဖြစ်နေသလဲ စိုးရိမ်ပြီး သတိတရ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း.....
Posted by Nay Nay Naing at 9/01/2008 11:53:00 AM
I think according ur music list post in ur blog, u should be oldies same like as me.... I also now stressalot of work plus studies..... How to release out? Take care ur ealth, in sg all are busy with their things. I happened before that kind of things that why i caution u..... Also write blogabit bit la. I quite bored already always come and read ur old ones.... :)
"နာနေဖျားနေရင် ဘယ်သူက လာပြီးစောင့်ရှောက်ပေးမလဲဟယ်။
ဆင်ခြင်ပြီးနေပါ မောင်ရယ်နော် လူကြုံနဲ့စကားလေးပါးလာရင်...
အနေအထိုင်ဆင်းရဲလို့ စိတ်ညစ်တဲ့ရက်တွေမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်
:P စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ ရာသီပြောင်းချိန်
Monday, September 01, 2008 7:38:00 PM
Anonymous >> အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ သီချင်းတွေ အကြိုက်တူတယ် သိရတာ ၀မ်းသာတယ်။ ခုရက်ပိုင်း သီချင်းတွေနားထောင်ဖြစ်တယ်။ အချိန်ရမှ ထပ်တင်ပါအုံးမယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်မကလည်း ပျင်းလာတိုင်း ဒီမှာ တစ်ခုခု လာရေးလေ့ ရှိတယ်။ ပျင်းပျင်းနဲ့ရေးတာတွေ ဖတ်ပြီး အပျင်းပြေတယ်ဆိုတော့ .. ကျွန်မလည်း ဒီမှာ များများရေးဖြစ်အောင်၊ ဖတ်တဲ့သူလည်း များများ လာဖတ်နိုင်အောင် ကျွန်မတို့အချိန်ပို၊ အချိန်အားလေးတွေ များများ အမြဲရနေရင် ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေမိတယ်။ တကယ်ဆို ပျင်းတယ်ဆိုတာလဲ အချိန်အားလေးရှိမှ ပျင်းလို့ ရတာ မဟုတ်လား။ ;)
မမွန် >> နေနေလည်း ဒီသီချင်းကို အားကြီးကြိုက်တယ်.. အခု ဒီမှာ မိုးတွေရွာပြီး ရာသီဥတု စပြောင်းနေပြီ။ အေးလာရင် နေလို့ မကောင်းတော့ဘူး။ ဟိုမှာလည်း ရာသီဥတု စပြောင်းနေပြီ မဟုတ်လား။
ဂရုတစိုက် ဆင်ခြင်ပြီးနေပါနော်.. :">
မခင်ဦးမေ နဲ့ညီမ SMNTL >> ကျေးဇူးပါ။ နေကောင်းအောင် ကိုယ်ကိုကိုယ် အရင်ကထက် ဂရုစိုက်နေတယ်. ဂရုမစိုက်လို့ လဲ မဖြစ်တော့ဘူးလေ။